VLC Media Player.1.1.7.final ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ VLC Media Player.1.1.7.final လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Update လေးတွေသုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးထားတာပါ...!သိပြီးသားသူတွေကလည်းသိခံပါလို့ ပြေားပါရစေ...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 19MB ပဲရှိပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "VLC Media Player.1.1.7.final ...!"